ब्लग : चितवनवासीको प्रचण्ड मोह – Saurahaonline.com
ब्लग : चितवनवासीको प्रचण्ड मोह
“बरु प्रचण्डलाई हामी नचाहिन सक्छ तर चितवन र हामीलाई प्रचण्ड चाहिन्छ” आफ्नो ३८ वर्ष लामो राजनीतिक जीवनलाई कम्युनिस्ट कित्तामा मोड्दै राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) का चितवन जिल्ला अध्यक्ष बद्री तिमिल्सिनाले सार्वजनिक मञ्चबाट बोल्दै गर्दा सभामा तालीको वर्षा भयो । काङ्ग्रेसको समर्थनमा आफ्नै पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे चुनावी दौडमा रहेका बेला पाण्डेका हस्ती तिमिल्सिना भने प्रचण्डलाई जिताउन माओवादी केन्द्र प्रवेश गरे ।
राजधानीबाट चितवन हेर्नेहरू भन्थे– “प्रचण्डलाई चितवनमा जित्न गाह्रो छ ।” पार्टीभित्रकै नेताहरू पनि चितवन माओवादी केन्द्रका लागि सुरक्षित ठान्दैनथे । तर वाम समीकरणपूर्व नै प्रचण्डले चितवनबाटै चुनाव लड्ने उद्घोष गरेका थिए । भर्खरै काङ्ग्रेससँग देखिएको चिसोपन, स्थानीय निर्वाचनमा एमालेसँग भएको तिक्तता र काङ्ग्रेस–राप्रपा गठबन्धन आदि कारणले धेरैले प्रचण्डका लागि चितवन चुनौतीपूर्ण देखेका थिए । तर, स्वयं प्रचण्ड चितवनबाट निर्वाचित हुनेमा पूर्णतः विश्वस्त थिए । चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट प्रचण्डको उम्मेदवारी त्यसैको परिणाम थियो ।
धेरैले सोच्थे– “प्रचण्ड र माओवादीहरू ध्वंशका लागि मात्रै माहिर छन् ।” तर, जतिबेला प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भए, मानिसहरूका अनुमान गलत सावित भए । १० महिनाको छोटै कार्याकालमा आर्थिक वृद्धिदर ह्वात्तै बढ्यो, ७.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्रचण्ड कार्याकालमै सम्भव भयो । आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिए । देशकै निम्ति कलङ्क ठानिएको लोडसेडिङको अन्त्य भयो । देशमा उज्यालो युगको प्रारम्भ भयो । पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्यो । विकास आयोजनाहरूमा तीब्र प्रगति भयो । १२ वर्षमै पहिलोपटक मूल्य वृद्धि स्थिर रह्यो ।
चितवन जिल्ला कृषिका लागि सबैभन्दा उर्भर भूमि हो । कृषिमै बी.एस्सी. गरेका प्रचण्ड त्यसका लागि उपर्युक्त पात्र हुन् । कृषिको आधुनिकीकरण, विविधीकरण र बजारीकरण प्रचण्डको प्राथमिकतामा छ । प्रचण्ड भन्छन्– “चुनाव जित्नका लागि मात्र म चितवन आएको होइन, चितवन राजनीतिक रूपले अग्रचेतना भएको जिल्ला हो । चितवनको विकासले देशकै विकासमा गुणात्मक अर्थ राख्दछ । तसर्थ, चितवनबाट निर्वाचित भएर चितवनको विकास र देशको नेतृत्वका लागि तपाईंहरूको बीचमा आएको छु ।” धेरैपटक खोजेर पनि प्रचण्डलाई भोट हाल्न नपाएका चितवनबासी यसपटक प्रचण्डलाई भोट हाल्न पाउने कुराले दङ्ग देखिन्छन् । चुनावी कार्यक्रममा प्रचण्ड जहाँ पुग्छन्, त्यहाँ छुट्टै रौनक र आत्मीयता झल्किन्छ ।
राजनीतिक दृष्टिले हेर्नेहरू चितवन क्षेत्र नं. ३ मा प्रचण्डको प्रतिस्पर्धी नै नभएको ठान्दछन् । देशकै सर्वोच्च नेता, गणतन्त्रको नायक, शान्ति प्रक्रियाको हस्ती, अनि १० महिने प्रधानमन्त्री कालमा विकास र समृद्धिमा नयाँ मानक स्थापित गरेको नेता चितवन आउँदा प्रतिस्पर्धीहरू छायाँ परेको देखिन्छ । काङ्ग्रेस र राप्रपाका नेताहरू पनि प्रचण्डतिर आशाको नजरले हेरिरहेका छन् । चितवनमा प्रचण्डको आगमनले जिल्लामा राजनीतिक तिक्तता मात्र घटेको छैन, जिल्लाको मियो भेटिएको महशुस गर्दैछन् चितवनबासी ।
प्रत्यासी पाण्डे नेपालका (क) वर्गकै निर्माण व्यवसायी हुन् । तर उनी वैचारिक दख्खल, जन सम्बन्ध, राजनीतिक चरित्रमा निकै कमजोर देखिन्छन् । मुग्लिन–नारायणगढ खण्डको सडक निर्माण कार्यबीचमै छोडेको अभियोग खेपेका पाण्डे चुनावका बेला मात्र जनतामा जाने र बाँकी समय ठेक्का–पट्टामै व्यस्त हुने जनगुनासो व्यापक देखिन्छ । राप्रपाका चर्चित र स्थापित नेता बद्री माओवादीमा आएसँगै पाण्डेको मनोबल ह्वात्तै गिरेको स्थानीयको बुझाइ छ । काङ्ग्रेसको भर परेर निर्वाचनमा होमिएका पाण्डेका लागि प्रचण्डको उपस्थिति नै फलामको चिउरा बनेको धेरैको बुझाइ छ ।
(तिमिल्सिना प्रचण्डका प्रेस सहयोगी हुन्)